Xasan Daahir: Al-Shabaab wali waan taageersanahay | KEYDMEDIA ONLINE
Xasan Daahir: Al-Shabaab wali waan taageersanahay
Xasan Daahir ayaa mudo sanado ah ku jira xabsi guri, isagoo u xiran dowladda Federaalka oo uu ka diiday inuu cambaareeyay argagaxisadda, islamarkaana ka tanaasulo fekerkiisa xagjirka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xasan Daahir Aweys ayaa muuqaal uu soo duubay ku sheegay in uusan ku tanaasuli doonin fekerkiisa uu ku taageerayo yahay Kooxda Al-Shabaab ee qaraxyada ku laynaysa shacabka Soomaaliya.
Wuxuu Xasan Daahir shaaciyay inuu Al-Shabaab ku taageerayo dagaalka ay dalka ka wadaan oo uu u arko inay cadow kusoo duulay dalka ay kula jiraan, balse uu kasoo horjeedo falalka ay ku gumaadayaan Shacabka.
"Waxaan isku raacsanahay dagaalka, maxaa yeelay dalka cadow ayaa haysta, waxaana isku khilaafsanahay dagaalka ayay dadka shacabka ah ku dareen," ayuu yiri Xasan Daahir, oo ah maskaxda ka dambeysay in dalka ay argagaxisadda ka abuuranto.
Hogaamiyahan Soomaaliya ka abaabulay ururo argagaxiso, ayaa ugu dambeyn galay gacanta dowladda isagoo kasoo cararay Kooxda Al-Shabaab oo isku dayday inay disho 2013.
0 Comments Topics: xasan daahir
Warar 5 October 2020 18:09
DF oo laga dalbaday inay sii dayso Mukhtaar Robow
Warar 13 August 2020 14:33